QALAB CUSUB OO JINSI AH OO KU YAAL GOBOLKA MOSCOW: ISBEDDELLADA SOO-SAARKA - MAQAALLO
Qalab cusub oo jinsi ah oo ku yaal gobolka Moscow: isbeddellada soo-saarka
Andrei Razin, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada ee gobolka Moscow, ayaa sheegay in soo saarista qoob-ka-guuraaga, oo dhismaha hadda la fulinayo, ay gaari doonto 20.5 kun oo ton oo ah sannadkii.
Degmada Dmitrovsky ee gobolka Moscow - waa goobta dhismaha cusub ee paanaha. Xakamaynta tayada dhismaha iyo xisaabinta dakhliga mustaqbalka ee mustaqbalka waxaa sameeyey Andrei Razin, Madaxa Wasaaradda Beeraha iyo Cuntada ee gobolka Moscow. Heerarka fulinta mashruuca iyo horumarka goobta shaqada ayaa sidoo kale lagu sheegay wasiirka.
"Qeybta Caanaha": shirkad ka socota gobolka Moscow ayaa ka soo jiidatay jiis iyadoo leh E. coli iyo caaryar
Marka la eego kuwa ka mas'uulka ah dhismaha iyo wax soo saarka mustaqbalka, farmaajada ugu horreysa ee lagu sameeyo Kooxda Xeedadka, dadka deggan gobolka Moscow waxay isku dayi karaan 2020. Andrei Razin ayaa baaray goobta dhismaha, isaga oo lagu wargeliyay natiijooyinkii hore loo gaaray.
Sida laga soo xigtay Razin, tallaabada dhismuhu waa mid aad u sareeya. Biyaha, bulaacadaha iyo gaasku waa siyaabo horay loo diyaariyey in la galo ficil. Bilawga dhismaha waddooyinka ayaa la qorshaynayaa bisha Abriil, horaantii Luulyo, shaqaalaha ayaa bilaabi doona inay soo saaraan jiis. Wasiirka ayaa xusay in marka la eego jadwalka, sannadka 2021, mugga wax-soo-saarka ayaa gaari doona 20.5 kun oo tan.
Swizerland, sameynta casaan jilicsan